I-BRHE i-Wireless Controller ye-PS4 / Pro / Slim / PC Accessories
Umothuko owakhelwe ngaphakathi kabini kunye nomsebenzi wenzwa yomxhuzulane, ikunika ukungcangcazela okwahlukileyo kunye namava omdlalo wokwenyani.
Turbo for Auto-umlilo
Ngokucofa okukodwa kokudubula okuqhubekayo, unokufumana ukuchaneka kokujolisa okuphezulu kunye namava angcono kwimidlalo ye-FPS esports.
Ihlala kwiiyure ze-8-10 zokusetyenziswa ngokuqhubekayo kunye neeyure ze-2-3 kuphela zexesha lokutshaja.
Izinti ezimbini ze-analog kunye namaqhosha e-trigger ane-lag encinci kunye nokwanda kovakalelo, ukwenzela ukuchaneka okuphezulu kwiintshukumo.
Iziko le-Multitouch pad linika uchuku olongezelelweyo kumava ewonke kwaye uphucule amathuba akho okudlala.
Akukho kulibaziseka, i-lags okanye ukuphazamiseka.Uqhagamshelwano oluzinzileyo lothumelo phakathi kweemitha ezili-10.
Ungadlala ngokudlala umdlalo wakho okanye wabelane ngamaxesha akho okudlala ngokucofa okukodwa.
Izithethi ezakhelwe ngaphakathi kunye ne-headphone jack yestereo
Isilawuli esingenacingo sinesithethi esakhelwe ngaphakathi kunye nejekhi ye-headset ye-stereo, i-3.5mm ye-audio jack ibonelela ngesisombululo esisebenzayo somntu kumdlali ofuna ukumamela kwimidlalo yabo ngasese.
1 x Isilawuli esingenazingcingo sePS4
I-1 x Uhlobo lwe-C Cable
2x Ubhontsi Ukubamba Caps
*Iimveliso zomntu wesithathu, hayi ezisemthethweni.
*Nceda uhlawule kuqala emva kokufumana isilawuli.
*Ayinakudlala imidlalo yePS-5.
*Ukuba kukho into engalunganga ngemveliso, inokusetwa ngokutsha.Ukwenza oko sebenzisa nje isixhobo esincinci kwaye ucofe iqhosha lokuseta kwakhona elingasemva komlawuli.
*Ukudlala imidlalo yePC, kufuneka usebenzise intambo yokutshaja ukuqhagamshela.
Ngaphambili: I-PS4 yoMlawuli ongenazingcingo, uPhucula iGamepad eRemote eTshajwayo kwi-Playstation 4/Slim/Pro Console/PC Game with Dual Shock, Touch Pad kunye ne-USB Cable Thumb Grip Cap (Blue)
Okulandelayo: IsiLawuli soTshintsho esinoKuvuka, iGamepad yeBluetooth eneQhosha eliSetyenziswayo leMotion Turbo Vibration RGB Light, isiLawuli sePro esingenazingcingo seNintendo Tshintshela/Tshintsha iLite/Imidlalo yePC-Phucula ngo-2021
Tshintsha isilawuli ngokuvuka, umdlalo weBluetooth...